Talenta 10 afaka trandrahina ao an-trano - Tily eto Madagasikara
Talenta 10 afaka trandrahina ao an-trano
Datin'ny lahatsoratra 4 juillet 2020
Anisan'ny talenta afaka trandrahina ao an-trano ny fitendrena zava-maneno. Sary : sariefijery avy amin'ny horonantsarin'i Matthan, lovitao ao amin'ny Faritany Mangoro Moramanga
Mandalo vaninandro miavaka izao tontolo izao ka niteraka fiovana goavana maro teo amin’ny fomba fiainantsika toy ny fihibohana nandritra ny fotoana maharitra, ny fitafiana arotava lasa fitafy andavanandro, ny tsy fahafahana mivory sy mifampitakosona. Isan’ny tena iharan’izany indrindra ny skotisma, izay tena miaina ny fiainana ankalamanjana sy ny fiainam-bondrona. Tsy sakana amin’ny fivelaran-tenan’ny tsirairay nefa izany satria ny fahaizana miaina amin’ny zava-misy indrindra aza no tena mampiavaka ny skoto. Hany ka lasa fotoana ahafahana mitrandraka talenta sy hanamafisana ireo traikefa ilaina amin’ny fiainana ilay fotoana voatery nijanonana ao an-trano iny.
Ireto ary misy karazana fahaiza-manao 10 afaka trandrahin’ise ao an-trano miaraka amin’ireo sopapa vitsivitsy ahafahan’ise manitatra misimisy kokoa. Tsy misy filaharany manokana ireto fa anjaran’ise no misafidy izay mahasarika kokoa an’ise.
Kabary sy kanto malagasy
Isan’ny tsy ilàna fitaovana maro no tsy ilàna toerana midadasika ny fianarana kabary sy ny zava-kanto vita amin’ny teny. Na teny malagasy io na teny vahiny. Azo atao tsara ny mitrandraka azy mialoha amin’ny alalan’ny boky na ny fifanakalozana amin’ireo mpiangaly hafa amin’ny alalan’ny fitaovam-pifandraisana misy. Ary rehefa hizara dia eo ny ankohonan’ise ho mpihaino voalohany.
Fikambanan’ny Mpikabary Malagasy ( Facebook – www.fimpima.org )
Faribolana Sandratra : Facebook ; isaky ny sabotsy faha-4 ao amin’ny CGM Analakely
Asa tanana amin’ny taratasy
Isan’ny fitaovana tsy misaraka amin’ny mpianatra mihitsy ny taratasy. Mba tsy verivery foana ireny taratasy tsy ampiasaina intsony ireny dia maro ny fomba mety mbola afaka hampiasana na hanodinana azy. Raha tian’ise kokoa ny miangaly zava-kanto dia mety ho fomba iray afaka ho trandrahin’ise hampiasana azy ireny ny fianarana asa tanana amin’ny taratasy, ilay antsoina hoe origami (raha famoretana taratasy tsy tapahina) na kirigami (raha mampiasa hety sy mila manapaka taratasy).
Ahafahan’ise mitrandraka :
Fold’N Fly : Karazana teknika fanaovana fiaramanidina taratasy hafakely
Jo Nakashima – Origami tutorials : Horonantsary torolalana fanaovana origami
Haitsiro sy fanaovana sakafo
Lalao Tsaiky : lalao facebook ianarana ireo karazan-tsakafo ara-pahasalamana
750g : Fandaharana YouTube momba ny haitsiro
Sakafo sy ny tontolony : Vondrona facebook momba ny fahaiza-manao momba ny fikarakarana lakozia
Hira Tily : Vondrona facebook fifampizarana hira tily mitaiza tonony, feony, solfa, solfège …
TONTOLON‘NY SARY SY HOSODOKO MALAGASY ! 🙂
Jean A. Ravelona : www.ravelona.com
IOGT Connect Smart : Ireo tsara ho fantatra mba ho mailo rehefa mampiasa internet :
Thom Reo : Horonantsary YouTube fianarana mampiasa Word, Excel, Powerpoint, Wix, …
Microsoft.com : Torohevitra sy fikafika fampiasana Office (Word, Excel, Powerpoint, …)
Raha ny fikarohan’ireo manam-pahaizana momba ny fahasalamana dia tandindonin-doza ny fahasalaman’ny ankamaroan’ny tanora nohon’ny tsy fahampian’ny fitaizam-batana. Mety ho antony vao mainka hampihena izany fihetsiketsehana izany koa aza nefa ny fiovana nateraky ny fihibohana sy ny naha-voatery nijanona an-trano nandritra ny fotoana lava. Maro nefa ny fomba ahafahana manohy ny fitaizam-batana ao an-trano.
Torolalan’ny OMS momba ny fitaizam-batana : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
Tsara ho fantatra 10 momba ny fitaizam-batana (OMS) : https://www.who.int/features/factfiles/physical_activity/fr/
How can #scouts support communities in covid19 response while #stayAtHome ?
In #Madagascar, Vazika Matotra sews masks and share them to his neighbours. pic.twitter.com/W1QyveUpQ2
— Tily eto Madagasikara (@TilyScout) May 1, 2020
Sanatria anie ka ny Tily no ho voalaza hoe “tsy mahay mitam-panjaitra”. Isan’ny fahaiza-manao ilaina foana ny fahaizana manjaitra raha mbola mitafy akanjo koa ny olombelona. Azon’ise atao tsara amin’izao vaninandro izao no manomboka mampihatra amin’ny fanjairana arotava ho an’ise sy ny ankohonan’ise.
Couture débutant : Youtube
N’zaitra sy ny tontolony : Groupe Facebook fifampizarana momba ny zaitra
Sewing – Tips & Tutorial : Pejy facebook mizara horonantsary fianarana zaitra
Ohatra ihany ireto nozaraina tamin’ise ireto fa azo antoka hoe mbola maro tsy tamby isaina ny karazana talenta sy fahaiza-manao azo trandrahina ao an-trano. Anjaran’ise sisa ny misafidy izay hita fa sahaza an’ise, mampihatra azy, ary aza adinoina ny mizara izay azo amin’ny ankohonana sy ny enina, sokajy na fokonolona misy an’ise … eny fa na mbola tsy afaka mihaona mivantana aza.
N.B : Ny fanomezana ireo rohy notsongaina ireo dia tsy midika fanohanana na fankatoavana manokana azy ireo avy amin’ny Tily eto Madagasikara fa ohatra omena ihany.
← Hira Fanekena lovitao → Firafitry ny skotisma amin’ny sehatra iraisam-pirenena